ချစ်သူကို ကောင်းစေချင်တဲ့သူတိုင်းမှာရှိတဲ့အတ္တ … - Thu Ta Myay
ချစ်သူကို ကောင်းစေချင်တဲ့သူတိုင်းမှာရှိတဲ့အတ္တ …
August 14, 2020 mgthuta
ချစ်သူ ကို ကောင်း စေ ချင် တာ ၊ အ ဆင့် မြင့် မြင့် နေ စေ ချင် တာ တ ကယ် ချစ် တဲ့ သူ တိုင်းမှာ ရှိ တဲ့ ဆ န္ဒ တစ် ခု ပါ ။ ချစ် သူ ကို ကောင်း စေ ချင် စိတ် တွေ များ လာ တဲ့ အ ခါ ကိုယ့် ရဲ့ ဆ န္ဒ တွေ ဟာ အ တ္တ တွေ ဖြစ် သွား တတ် ပါ တယ် ။ ခု ဖော် ပြ ပေး မှာ က တော့ ချစ် သူ ကို ကောင်း စေ ချင် တဲ့ သူ တိုင်း မှာ ရှိ တဲ့ အ တ္တ တွေ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် …
( ၁ ) ဆူ တယ်
ချစ် သူ ကို ကောင်း စေ ချင် တဲ့ စိတ် နဲ့ တစ် ခါ တ လေ မှာ ဆူ ပူ မိ တတ် ပါ တယ် ။ ဒါ ပေ မယ့်လည်း တစ် ခါ တ လေ မှာ စ ကား လုံး တွေ က ကြမ်း သွား တာ မျိုး ၊ လွန် သွား တာ မျိုး တွေ ဖြစ် တတ် ပါ တယ် ။ ဒါ ပေ မယ့် လည်း သူ့ ကို ကောင်း စေ ချင် တဲ့ အ တ္တ ကြောင့် ဖြစ် သွားတာ မျိုး ပါ ပဲ …. ။
( ၂ ) ဆုံး မ တယ်
ချစ် သူ ကို ကောင်း စေ ချင် တဲ့ အ တွက် ကိုယ့် ဖက် က နေ အ မေ တစ် ယောက် ၊ အ မ တစ်ယောက် လို ဆုံး မ တတ် ကြ ပါ တယ် ။ ကိုယ် အ ရမ်း တော် နေ လို့ ၊ တတ် နေ လို့ ဆို တာထက် ချစ် သူ ကို ကောင်း စေ ချင် တဲ့ စိတ် နဲ့ ကိုယ် တတ် သ လောက် ၊ မှတ် သ လောက် ဆုံးမပေး တာ ဖြစ် ပါ တယ် …. ။
( ၃ ) တစ် ခါ တ လေ နာ ကျင် အောင် လုပ် မိ တယ်
ချစ် သူ ကို ကောင်း စေ ချင် တဲ့ စိတ် နဲ့ လုပ် လိုက် တဲ့ အ ရာ ၊ ပြော လိုက် တဲ့ စ ကား တွေ ဟာ တစ် ခါ တ လေ မှာ ချစ် သူ ကို နာ ကျင် စေ ပါ တယ် ။ ချစ် သူ ကို နာ ကျင် စေ လို တဲ့ရည် ရွယ်ချက် တစ် ခု မှ မ ပါ ပေ မယ့် နာ ကျင် အောင် လုပ် မိ တတ် တဲ့ ကိုယ့် ကိုယ် ကို တစ် ခါ တ လေ အ ပြစ် တင် နေ မိ တတ် ပါ တယ် …. ။
( ၄ ) ချုပ် ခြယ် မိ တယ်
ချစ် သူ ကို တစ် ခါ တ လေ မှာ ချုပ် ခြယ် သ လို ဖြစ် သွား တတ် ပါ တယ် ။ ချစ် သူ က အ မှားလုပ် မိ မှာ ၊ ပတ် ဝန်း ကျင် ရဲ့ ဝေ ဖန် ကဲ့ ရဲ့ ခံ ရ မှာ တွေ ကို တွေး ကြောက် ပေး တဲ့ အ တွက်ပါ ။ ဘာ လုပ် ရင် ဘာ ဖြစ် မယ် ဆို တာ ကြို မြင် နေ တဲ့ ကိုယ့် အ တွက် တစ် ခါ တ လေ မှာ ချစ် သူ ကို ချုပ် ခြယ် သ လို ဖြစ် နေ တတ် ပါ တယ် …. ။
( ၅ ) ပို ပြီး အား စိုက် ထုတ် စေ ချင် တယ်
ချစ် သူ ကို တစ် ခါ တ လေ မှာ အား မ လို အား မ ရ ဖြစ် နေ တတ် ပါ တယ် ။ အ ကြောင်းက တော့ ဒီ ထက် ပို မြင့် တဲ့ ဘ ဝ တစ် ခု ကို ရောက် စေ ချင် လို့ ပါ ။ ချစ် သူ က တစ် ခါ တ လေ မှာ ပေါ့ ပျက် ပျက် နဲ့ ဇွဲ မ ရှိ ဘူး လို့ ထင် ပြီး အား မ လို အား မ ရ ဖြစ် နေ တတ် ပါ တယ် နော်
ခဈြသူ ကို ကောငျး စေ ခငျြ တာ ၊ အ ဆငျ့ မွငျ့ မွငျ့ နေ စေ ခငျြ တာ တ ကယျ ခဈြ တဲ့ သူ တိုငျးမှာ ရှိ တဲ့ ဆ န်ဒ တဈ ခု ပါ ။ ခဈြ သူ ကို ကောငျး စေ ခငျြ စိတျ တှေ မြား လာ တဲ့ အ ခါ ကိုယျ့ ရဲ့ ဆ န်ဒ တှေ ဟာ အ တ်တ တှေ ဖွဈ သှား တတျ ပါ တယျ ။ ခု ဖျော ပွ ပေး မှာ က တော့ ခဈြ သူ ကို ကောငျး စေ ခငျြ တဲ့ သူ တိုငျး မှာ ရှိ တဲ့ အ တ်တ တှေ ပဲ ဖွဈ ပါ တယျ ….. ။
( ၁ ) ဆူ တယျ
ခဈြ သူ ကို ကောငျး စေ ခငျြ တဲ့ စိတျ နဲ့ တဈ ခါ တ လေ မှာ ဆူ ပူ မိ တတျ ပါ တယျ ။ ဒါ ပေ မယျ့လညျး တဈ ခါ တ လေ မှာ စ ကား လုံး တှေ က ကွမျး သှား တာ မြိုး ၊ လှနျ သှား တာ မြိုး တှေ ဖွဈ တတျ ပါ တယျ ။ ဒါ ပေ မယျ့ လညျး သူ့ ကို ကောငျး စေ ခငျြ တဲ့ အ တ်တ ကွောငျ့ ဖွဈ သှားတာ မြိုး ပါ ပဲ …. ။
( ၂ ) ဆုံး မ တယျ
ခဈြ သူ ကို ကောငျး စေ ခငျြ တဲ့ အ တှကျ ကိုယျ့ ဖကျ က နေ အ မေ တဈ ယောကျ ၊ အ မ တဈယောကျ လို ဆုံး မ တတျ ကွ ပါ တယျ ။ ကိုယျ အ ရမျး တျော နေ လို့ ၊ တတျ နေ လို့ ဆို တာထကျ ခဈြ သူ ကို ကောငျး စေ ခငျြ တဲ့ စိတျ နဲ့ ကိုယျ တတျ သ လောကျ ၊ မှတျ သ လောကျ ဆုံးမပေး တာ ဖွဈ ပါ တယျ …. ။
( ၃ ) တဈ ခါ တ လေ နာ ကငျြ အောငျ လုပျ မိ တယျ
ခဈြ သူ ကို ကောငျး စေ ခငျြ တဲ့ စိတျ နဲ့ လုပျ လိုကျ တဲ့ အ ရာ ၊ ပွော လိုကျ တဲ့ စ ကား တှေ ဟာ တဈ ခါ တ လေ မှာ ခဈြ သူ ကို နာ ကငျြ စေ ပါ တယျ ။ ခဈြ သူ ကို နာ ကငျြ စေ လို တဲ့ရညျ ရှယျခကျြ တဈ ခု မှ မ ပါ ပေ မယျ့ နာ ကငျြ အောငျ လုပျ မိ တတျ တဲ့ ကိုယျ့ ကိုယျ ကို တဈ ခါ တ လေ အ ပွဈ တငျ နေ မိ တတျ ပါ တယျ …. ။
( ၄ ) ခြုပျ ခွယျ မိ တယျ
ခဈြ သူ ကို တဈ ခါ တ လေ မှာ ခြုပျ ခွယျ သ လို ဖွဈ သှား တတျ ပါ တယျ ။ ခဈြ သူ က အ မှားလုပျ မိ မှာ ၊ ပတျ ဝနျး ကငျြ ရဲ့ ဝေ ဖနျ ကဲ့ ရဲ့ ခံ ရ မှာ တှေ ကို တှေး ကွောကျ ပေး တဲ့ အ တှကျပါ ။ ဘာ လုပျ ရငျ ဘာ ဖွဈ မယျ ဆို တာ ကွို မွငျ နေ တဲ့ ကိုယျ့ အ တှကျ တဈ ခါ တ လေ မှာ ခဈြ သူ ကို ခြုပျ ခွယျ သ လို ဖွဈ နေ တတျ ပါ တယျ …. ။
( ၅ ) ပို ပွီး အား စိုကျ ထုတျ စေ ခငျြ တယျ
ခဈြ သူ ကို တဈ ခါ တ လေ မှာ အား မ လို အား မ ရ ဖွဈ နေ တတျ ပါ တယျ ။ အ ကွောငျးက တော့ ဒီ ထကျ ပို မွငျ့ တဲ့ ဘ ဝ တဈ ခု ကို ရောကျ စေ ခငျြ လို့ ပါ ။ ခဈြ သူ က တဈ ခါ တ လေ မှာ ပေါ့ ပကျြ ပကျြ နဲ့ ဇှဲ မ ရှိ ဘူး လို့ ထငျ ပွီး အား မ လို အား မ ရ ဖွဈ နေ တတျ ပါ တယျ နျော ….. ။
Previous Postလူတစ်ယောက်ကို ရာနှုန်းပြည့် မယုံပါနဲ့Next Postအသက်ကွာသူကို ချစ်မိတဲ့အခါ ရလာနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်များ